မသက်ဇင်: နိုင်ငံတကာအခြေအနေ ( ဂျပန် )
နိုင်ငံတကာအခြေအနေ ( ဂျပန် )
ဂျပန် ဒိုင်းယက် လွှတ်တော် အတွင်းမှ အကြီးဆုံး အတိုက် အခံ ပါတီဖြစ်ပြီး ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးကို ပြတ်သား စွာ ထောက်ခံသည့် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ဥက္ကဌ ဟတို
ယာမ ( အိုကီနာဝါ ကျွန်းမှ အမေရိကန် စစ်တပ် ဖယ်ရှား ရေး မပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် နှုတ်ထွက်သွားသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်) နှင့်စာရေးသူ တို့ စကား လက်ဆုံ အမှတ် တရ။
(ဂျပန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( မင်ရှုတို ) သည် ယခု ဒီဆောင်းပါး ရေးပြီး နောက် အာဏာရလာ သည့် တိုက်အခံ ပါတီဖြစ်သည်။ )
နိုင်ငံတကာ သမိုင်းကြောင်း နှင့် ယနေ့ ဂျီအိပ် ဟုခေါ်သည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး စက်မှု နိုင်ငံများ အကြောင်း ဆက် ရေးမည် ကြံသောအခါ ဂျပန်နိုင်ငံ အကြောင်း ရေးမိ သည် ဂျပန်နိုင်ငံသည် အာရှ တွင် အကြီးဆုံး စက်မှုနိုင်ငံကြီး ဖြစ်သည့်အပြင် ယနေ့မျက်မှောက် ကာလ တွင်အာစီယံ နိုင်ငံများ က ဂျပန် ၏ ခြေလှမ်းများအားကြည့်ပြီး သံယောင် လိုက်တတ်သောကြောင့် ရွေးချယ် လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျ ပန် နိုင်ငံ တွင် နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော် တောက်လျှောက် အာဏာ ရလာသည့် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (ဂျိမင်တို ) ၏ သမိုင်းကြောင်း အား လေ့လာကြည့်သော အခါတွင်။
ဂျပန်ပြည် တွင်း အုပ်စုဖွဲ့ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန် သည့် ယာကူဇာ အဖွဲ့တဖွဲ့ အား ကြိုးကိုင် သူ လက်ျာအစွန်း ရောက် ဝါဒီ တဦးဖြစ် သူ ယိုရှီအိုကိုဒါမာ က အစပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ် တွင် ကိုဒါမာသည် ဂျပန် အ စိုးရ အဖွဲ့ ဝင် ဝန်ကြီး အားလုံး ကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် ရန် စီစဉ်မှုဖြင့် ထောင်ကျခဲ့သည်။ ကိုဒါမာ ထောင်မှ လွှတ် လာပြီး နောက် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း တရုတ်ပြည်ရှိ ဂျပန်ရေတပ် အား လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း များ ပေး သွင်း ယင်း ပိုမို ချမ်းသာလာခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အပြီး အမေရိကန် မှ ဖမ်းဆီးထားသည့် အချမ်းသာဆုံး စစ် ရာ ဇဝတ် ကောင် ၆၄၄ ဦး အနက် ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည်။
အမေရိကန် သည် ကိုဒါမာ နှင့် အပေး အယူလုပ်ပြီး ၄င်းတို့ ယာကူဇာ အဖွဲ့ ဟောင်းများ ထံ ပြန်လွှတ် လိုက် သည် ကိုဒါမာ သည် နိုင်ငံရေးပါတီ တခုအဖြစ် လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အား စတင် ဖွဲ့စည်း တည် ထောင် လိုက်သည်။ သူ့ ပါတီ ကို ရှေးရိုး စဉ်လာ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ နှင့် ၁၉၅၅ တွင် ပေါင်းပြီး လျှင်ယနေ့ အထိ အာဏာရလာခဲ့သည်။
နောက်တဦး မှာ ကိုဒါမာ နှင့်အတူ ထောင်ကျခဲ့သည့် ကိုဒါမာ ၏ အရင်းနှီးဆုံး လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဘက် စစ်ရာဇဝတ် ကောင် ရယိုအိချိ ဆာဆာကာဝါ ဖြစ်သည်။ ဆာဆာကာဝါသည် ဂျပန်စစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ရေးအား နောက်ကွယ် မှ ကြိုးကိုင်ခဲ့သူ ဖက်ဆစ်တဦးဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ရှန်ဟိုင်း မှာ နေထိုင်လျက် တ ရုတ်ပြည်မ ကြီး မှ စိန်ရွှေများ လုယက်ပြီး ဂျပန်စစ်တပ် အား ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ လေယာဉ်စင်းလုံးဖြင့် ရောမ သို့ မကြာခဏ သွားရောက်ပြီး အာဏာရှင် မူဆိုလီနီ နှင့်မကြာခဏ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဟစ်တလာအား တွေ့ဆုံရန် ကြိုး ပမ်းခဲ့သော်လည်း မတွေ့လိုက်ရသည်ကို ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေသူတဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ကိုဒါမာ နှင့် အလွန်ရင်းနှီး သကဲ့သို့ ငှင်းတို့နှင့် ထောင်ကျဖေါ် ကျဘက် ၁၉၅၇ မှ ၁၉၆၀ အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ သူ နိဘူဆုကီကီရှီ နှင့်လည်း အလွန်ရင်းနှီးကြသည်။
ဂျပန် နိုင်ငံတွင်း လောင်းကစား ဝိုင်း တည်ထောင်ပြီး ပိုမို ချမ်းသာလာသည်။ အနှစ် ၂၀ အကြာတွင်၎င်း အမည် ဖြင့် ဆာဆာကာဝါ ဖောင်ဒေးရှင်းအား တည်ထောင်လိုက်ပြီး ၄င်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် သူသည် အကြီးအကဲ ဖြစ် လာသည် အဖွဲ့ခွဲ တခု မှာ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ လက်ထက် တွင် ယင်းဖောင်ဒေးရှင်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကိုင်ခဲ့ ကြသည်။
နောက်တဦးဖြစ်သူ မှာ ကိုဒါမာ ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးခဲ့သည့် ခခုအဲအိ တာနာကာဖြစ် သည် နောင် တ ချိန် တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ၏ နောက်ကွယ်မှ မင်းဆရာသည် ကိုဒါမာဖြစ်လာ သည်။ တာနာကာ သည် ပြည်သူ့ လုပ်ငန်း စီမံကိန်း များဖြစ်သည့် လမ်းတံတား အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရေးများ တွင် လာဘ် ငွေများ ယူပြီး ဂျပန် နိုင်ငံရေးသမားများ အား အသပြာ နိုင်ငံရေးသမား များဖြစ်ရန် လမ်းပြခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အဖွဲ့ခွဲမှ လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံရေး သမား များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃ သန်း လာဘ်ပေးမှု ဖြင့် ကိုဒါမာ နှင့် တာနာကာ နှစ်ဦး တို့ ထောင်ကျခဲ့ကြသည်။
တကယ်တော့ ဂျပန်လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီသည် လူတဦး မှ သည် အခြေတည်ပြီး အုပ်စုများနှင့် ပေါင်း စည်းထားသော နိုင်ငံရေးပါတီသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ တရပ်တွင် ရှိရမည့် နိုင်ငံရေး သဘောတရားအမြင် ဘာမှ မရှိပေ။ ဂျပန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ မှာ အမေရိကန်လုပ်သမျှ နေ့ မကူးမီ ၂၄ နာရီအတွင်း အပြေး အလွှား ထောက်ခံရေးပင်ဖြစ်သည်။ ကိုဒါမာသည် ဂျပန်လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တွင် တန်ခိုးသြဇာ အရှိ ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကာ အမေရိကန်တို့ အား ကောင်းစွာ အလုပ်အကျွေး ပြုခဲ့လေသည်။
၁၉၆၀ တွင် အမေရိကန် သမတ အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါ မှ ဂျပန်သို့ အလည်လာမည့် ခရီးစဉ် တွင် အမေရိကန် ဆန့် ကျင်ရေးသမားများ အား ထိန်းချုပ် ပေးရန် အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးများ သည် ကိုဒါမာ အား ချဉ်း ကပ် ခဲ့ သည်။ ထိုကိစ္စ အတွက် ကိုဒါမာ သည် သူ ၏ ယာကူဇာ အင်အား တစ်သောင်းရှစ်ထောင် ( ၁၈၀၀၀ ) ကို တပြည်လုံး အ နှံ့ ဖြန့်ထားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထို ခရီးစဉ် ပျက်သွားခဲ့ဘူးသည်။
ကိုဒါမာ မှ အစ ပြုခဲ့သည့် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ယနေ့ အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အာဏာရ လျက် ရှိပြီး ဂျပန် အကျိုး စီးပွား အတွက် လွယ်သည့် လမ်းစဉ် လိုက် ရေး သာဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဒီမို က ရေစီနိုင်ငံ စစ်စစ် မဟုတ် သကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် ပင်ပင်ပမ်းပမ်း အားထုတ်ခဲ့ရသည့် အစဉ်အလာ လည်း မရှိခဲ့သည် ကို လေ့လာတွေ့ ရှိရပါကြောင်း။
နောက် ဆက်တွဲ လက်ဆောင်
ဂျပန်လူမျိုး ပါမောက္ခ ဖူကူယားမား ( ဂျွန်ဟော့ကင်းစ်တက္ကသိုလ် အဆင့်မြင့်နိုင်ငံတကာ လေ့လာမှု ဌာန ) ၏ စာ အုပ်တအုပ်ထွက်လာသည်။ ဖူကူယားမားအပါအဝင် ပညာရှင်အများစု ၏ သုံးသပ်ချက်များ တွင် ဒီမိုကရေစီ အ လို မရှိသည့် တိုင်းပြည်ကို အပြင်ကနေ အတင်းတွန်းပြောင်းချင်လို့ မရနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒီမိုကရေစီ တိုးမြှင့်ရေး ဆို တာ သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင်း နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှု အပြောင်းအလဲ ( social change ) တွေ ရင့်မှည့် လာ စေရန်လိုပါသည်။ ဒေသတွင်းလူလတ်တန်းစားထွန်းကားရေး ၊ တက္ကနိုကရက်တွေ ပေါ်ထွန်းရေး ဒီမို က ရေ စီ ရေခံ မြေခံ ရင့်မာလာစေရန် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးခြင်းက ပိုပြီး အခရာကျသည်ဟု ပြောကြားပြီး ၊ စိတ်ဝင် စားစရာ က ၊ မာက့်စ် လီနင်ဝါဒီ တွေရော ၊ အမေရိကန် နီယွန်ကွန်ဆာဗေးတစ် တို့ က ပါ ရီဗော်လူးရှင်းပုံစံ မျဉ်းတန်း ( linear ) လုက်ကိုင်နေကြခြင်းပါပဲဟု အီရတ်စစ်ပွဲ သုံးနှစ်မြောက်တွင် အားလုံးသ်ိချင်နေကြသည့် ပြင်ပ မှ ဒီမိုက ရေစီ ကို တင်ပို့ ( export ) လို့ ရမရ ကို ပါမောက္ခ ဖူကူယာမားနှင့် ပညာရှင်များက တညီတ ညွတ် တည်း ဖြေ ကြား သွားခဲ့ကြပါသည်။
Posted by မသက်ဇင် at 10:19 AM
အမသက်ဇင်ရေ ကောင်းလိုက်တဲ့ပို့စ်ဗျာ အရေးအသားတွေအားလုံးကောင်းတဲ့ထဲက အောက်ဆုံးပိုဒ် နောက်ဆက်တွဲလက်ဆောင်ကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျာ အဲဒီထဲက မာက့်စ် လီနင်ဝါဒ ကိုလိုချင်တယ်ဗျာ ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီစာလေးမျှပေးပါလား လိုက်ရှာနေတာ တော်တော်ကြာပြီ ဒီမှာရှာရခက်လို့ပါခင်ဗျာ
အမသက်ဇင်ရေ မာ့က်စ်ဝါဒကနေ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ကိုရောက်ရှိလာတာလား မတရားမှုတွေ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ အမြတ်ကြီးစားမှုတွေ ဖိနှိပ်မှုတွေ
လူတန်းစားခွဲခြားမှုတွေ နဲ့ပြည့်နေတဲ့လောကကြီးကို မာ့က်စ်ကအနစ်နာခံတိုက်ဖျက်ခဲ့လို့ အဲဒီဝါဒ ထွန်းကားတာလား မာ့က်စ်ဝါဒ က ရုပ်ဝါဒ ကိုဦးစားပေးတာ သိတာက အဲဒီဝါဒက လူတစ်ဦးတည်း အပေါ်မှာမဟုတ်ပဲ ပါတီ နှင့် အစိုးရပေါ်မှာလည်းသြဇာလွှမ်းမိုးပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့ဝါဒ လို့ စတာလင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာလက်တစ်နှင့်သမိုင်း ရုပ်ဝါဒ ကျမ်းငယ်မှာ ဖော်ပြထားတယ်လို့သိရတယ် ရှင်းပြပါဦးအမရေ
အစ်မရှင်းပြမှပဲ ကောင်ကောင်းသိရတော့တယ် ။ အရမ်း
ပွေလီ ရှုပ်ထွေးတာ နိုင်ငံရေးပါပဲ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစ်မ မသက်ဇင်ရေ ။ နောက်ဆက်တွဲများကို လည်း
စောင့်မျှော်နေပါတယ် ခင်ဗျ ။ :)
လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ ဂျပန်အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီ ကလဲ ယာကူဇာနဲ့ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှု ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးထပ်ဖြည့်နိူင်ရင် ပိုကောင်းမယ်အမ..... ပိုပြီးပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဗျာ။
ဒီအပုဒ်က သိတ်မရှင်းဘူးဗျ။ ကိုဒါမာ သည် နိုင်ငံရေးပါတီ တခုအဖြစ် လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အား စတင် ဖွဲ့စည်း တည် ထောင် လိုက်သည်။ သူ့ပါတီ ကို ရှေးရိုး စဉ်လာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ နှင့် ၁၉၅၅ တွင် ပေါင်းပြီး လျှင်-- ယနေ့ အထိ အာဏာရလာခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ပါတီ(၂)ခု နာမည်က တူနေတယ်ဗျ။
အစ်မသက်ဇင်ရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ပိုစ့်လေးပါပဲဗျာ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ပြီးသိသင့်တာလေးတွေ ရေးပေးထားတာပါဗျာ။ ဗဟုသုတရစရာတွေချည်းပါပဲအစ်မရေ။ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေဗျာ အစ်မသက်ဇင်။
မသက်ဇင်ရေ ကျွန်တော် သေချာဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါတယ်။
အမရေ....ဒီကောက်နှုတ်ချက်ကို တနေရာမှာ ဖတ်ဖူးသလိုပဲ...ထားပါလေ... သေခြာမှုတွေကို warming up လုပ်ပေး ဆက်စပ်ပေးတယ် ဆိုတော့ ကျေးဂျူးကဘာပါ...ကောင်းတယ်ဗျာ စိတ်မရှိနဲ့ ကိုယ်ပိုင်က ပိုကောင်းပါတယ် ...... ရင်နှီးစွာဖြင့် .... အမ လောက်မသိသေးတဲ့ .....ဒူကဘာ။
"ကြက်ဥနှစ်ရောင်၊တိမ်တောင်သဖွယ်၊မင်းရေးကျယ်" ပါလားနော်။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော် တစ်ပါတီစနစ် နဲ့ ကျင့်သုံးလာခဲ့ပြီး လာဘ်စားမှုတွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရေး ကို ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ နိုင်ငံကြီးက တစ်လုံးတစ်ပါဒ မျှ ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်း မရှိဖူးလို့ အံ့သြ နေတာပါ.။ဆန့်ကျင်ဘက် အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်က တစ်ပါတီ စနစ်နှစ်မျိုး ကိုတော့ အခွင့်သင့်တိုင်း ဖိနှိပ်ပြောကြားတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ ရဲ့ မကောင်း သတင်းတွေကို အဲဒီ(နိုင်ငံ) မီဒီယာတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေက အလျင်စလို နိုင်လွန်းတယ်။ တစ်ခါက တရုတ်ပြည် ရဲ့ အရုပ်ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ကို အန္တရာယ် ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ် ဆိုပြီး မှားယွင်းစွပ်စွဲ ခဲ့တယ်။
လက်တွေ့မှာလည်း နိုင်ငံအသီးသီးဟာ ဗြဟ္မစိုရ် တရားနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ ကို သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ မိမိတို့ အကျိုးစီးပွား ရှိမယ် ဆိုရင် လူသန်းပေါင်းများစွာကို ငတ်ပြတ်သေကြေ အောင် ထားမဲ့ နိုင်ငံတွေံများ ပါ လိမ့်မယ်။
အစ်မရေ..မျက်စိကိုကျယ်ကျယ် ဖွင့် ထားပါတယ်။ မအအောင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်.။ လွယ်တော့ လွယ်ဘူး။
ပို့စ်ရေးရတာပင်ပန်းသွားပြီလား။ ကျနော်ကွန်မန့်ထဲ အမှားတွေရှိမှာပဲ. ။ခွင့်လွှတ် သည်းခံ ပေးပါခင်ဗျာ။
နိုင်ငံတကာနှင့်ပတ်သတ် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတွေကို အားပေးနေလျက်ပါ မသက်ဇင်။ အမြင်ပိုကျယ်သွားဖို့အတွက် မြန်မာပြည်အပြင် အခြားနိုင်ငံများရဲ့ History ကိုလည်း ကြည့်ရှုလေ့လာဖို့ အားလုံးလိုအပ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ အပေါ်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောသလိုပဲ တရုတ်နှင့်ရုရှားကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
- ယခုလို နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကို သိရတယ်၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ၊သမိုင်းလေ့လာသူတွေအတွက် တဒေါင့်တစ်နေရာက ပံ့ပိုးပေးလို့တာဝန်ကျေပြွန်တယ် ဆိုပြီး ဆရာမအတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...။
- ဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရေး သမားများ၊ပရောဟိတ်နိုင်ငံရေးသမား များ၊ခါးတောင်း ကျိုက်တခြား ဟိုဟာတစ်ခြားနိုင်ငံေ၇းသမားများ၊ မျောက် ပြ ဆန်တောင်း နိုင်ငံေ၇းသမားများ၊၀တ်ကျေ တန်းကျေ နိုင်ငံရေးသမားများကို မြင်တွေ့နေရတော့ ဆရာမရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလက်ဆောင် Export ဒီမိုကရေစီ က နိုင်ငံေ၇းစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် ပို၍ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ဆရာမရေ...
(ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးသမားများကို ဦးညွတ် လေးစားလျှက်)..
တီတီဇင် တော်လိုက်တာနော်.. ဗဟုသုတ တွေ
တီတီပို့စ် ကိုဖတ်လိုက်တော့ နားမလည်တာတွေ
ဒေသတွင်းလူလတ်တန်းစားထွန်းကားရေး -တက္ကနိုကရက်တွေ ပေါ်ထွန်းရေး -ဒီမို က ရေ စီ ရေခံ -မြေခံ ရင့်မာလာစေရန် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးခြင်းက ပိုပြီး အခရာကျသည်....ဆိုတော့
မသိတာလေးတွေ သိသိလိုက်ရပါတယ် သမိုင်းဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်မဟုတ်လား
ဘယ်လောက်အားထုတ်လေ့လာပြီးရေးရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်မိလို့လေးစားပါတယ်ဗျာ..။
မသက်ဇင်ရေ ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလုပ်ရပ်တွေနဲ့ လက်ရှိ စီးပွားရေးတောင့်တင်းတာကလွဲပြီး ကျန်တာသိပ်မသိလို့ မှတ်ချက်သိပ်မပေးတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် မပေါ်ထွန်းသေးဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဂျန်ပန်ပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုနဲ့ပဲ ဆိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ တခြားနိုင်ငံတခုက ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နဲ့ မကိုက်ညီလို့ ဝေဖန်ရှုပ်ချ၊ ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာဟာ နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်နဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ် အများဆုံးမူတည် လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဂျပန်တို့ စင်္ကာပူတို့လို နိုင်ငံတွေမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေက စီးပွားရေးဖူလှုံနေမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ တခြားအခွင့်အရေးတွေကို အာရုံမစိုက်ကြပဲ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြား အဆင်ပြေနေကြတာ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်က ကြည်ဖြူနေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေက ဘာမှသွားပြောလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ မစစ်မှန်တာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မြန်မာတို့ တရုတ်တို့မှာ မရှိလို့ သူများဝေဖန်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသား ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ရှိနေသေးတာကိုက အမေရိကန် အပါအ၀င် ပြင်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ ဝေဖန်ခံရမှုနည်းတဲ့ အချက်လို့ ထင်ရတယ်။
မမသက်ဇင်ရေ တစ်ကယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ ..
အရိုးရှင်းဆုံးဝန်ခံရရင်တော့ တစ်ခါမှ မသိဘူးတဲ့
အခုလို အပင်ပန်းခံပြီး စုစည်း သုံးသပ်ပြတာ
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ဒီပို့စ်လေးတွေကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ကူးထားလိုက်ပြီး အစ်မရေ ..
ခုမှ လာရေးဖြစ်တယ်ဗျာ ၊၊အမြဲတမ်း ဗဟုသုတ တွေ ဝေမျှ တတ်တဲ့ မသက်ဇင် ကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ ၊၊ ကျနော် အမြဲရောက်ပါတယ် ၊၊ ကိုယ်တိုင် လည်းမရေးဖြစ်တာနဲ့ ၊၊ သတိတရ အမြဲရှိလို့လဲ
၀မ်းသာတယ်ဗျာ ၊၊ ကျေးဇူးပါ ၊၊
အရင်ရက်တွေကလည်း ရေးလို့မရ။ ခုရေးထားတဲ့ ကွန်မန့်ကလည်း ပျက်သွားပြန်ပါတယ်။ ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဇွတ်လုပ်သွားတယ်။
- ကွန်မန့်တွေကိုပါ သဘောကျ
- ဂျပန်ကို ဆက်ရေးစေချင်။ အာရှမှာ အခရာကျတယ်ထင်၍
- နှင်းဆီ “မမ”နဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာရော ဆက်ပါအုံးလား
ပုဂံသမိုင်းတွေကနေ တဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဖတ်ပြီး လေးစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်သိပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ အပိုင်းတွေမို့လို့ လေ့လာသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စံနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲချင်ရင် အပြောင်းအလဲတွေ အရင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ ကျွန်တော်လဲ သဘောတူပါတယ်။
ဒီလိုကောင်းပြီး လေးနက်တန်းဖိုးရှိ တဲ့ ဗဟုသုတရစရာ ပို့စ်လေး အတွက် တကယ်ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်. နောင်လဲ ဒီလို ပို့စ်လေးတွေ များများရေးနိုင်ပါစေ၊ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျား
မသက်ဇင်ရေ.. မသိတာတွေမှတ်သားသွားပါတယ်... အားပေးလျက်ပါ... ဒါနဲ့မူလ resources တွေထည့်ပေးလို့ရမလား reference တွေပေါ့.. စိတ်ဝင်စားမိလို့ ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ပါ.. ကျေးဇူးနော်..
အစ်မရေ လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရေးကို ရေးသားထားတာ တကယ့်ကို ဗဟုသုတ ရပါတယ်ဗျာ။ ဂျပန်မှာကလည်း နိုင်ငံရေး စီးပားရေး ဘာပဲလုပ်လုပ် ယာကူဇာနဲ့ကင်းနိုင်တဲ့သူက ခပ်ရှားရှားရယ်။ ဒါနဲ့အစ်မရေ princess & photographer ဇာတ်လမ်းလေး ပေါ်မလာတာ ကြာပြီနော်။
အစ်မ မသက်ဇင် ခင်များ
ဗဟုသုတတွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အစ်မကို
အစ်မ မသက်ဇင်ရေ စာလာဖတ်ပါတယ်...
နိုင်ငံတကာ ဂျပန်ကို လာဖတ်သွားပါတယ်---
ဂျပန်မှာ နေနေပေမယ့် ဒီအကြောင်းအရာတွေကို လျစ်လျူရူနေမိတာ။ အစ်မစာ ဖတ်မိလို့ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယာကူဇာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်
တပါတီထဲက နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော် အာဏာရနေတာ
ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ခြံစည်း
ရိုးပေါ်ခွထိုင်ပြီး။ မြန်မာစစ်အစိုးရကို (အိုဒီအေ)
ယခုတက်လာတဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ဟာ့တိုယာမ ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အစိုးရသစ်ကရော